I-Fibromyalgia ne-Gluten: Ingabe Ukudla Okuqukethe I-Gluten Kungadala Ukuvuvukala Emzimbeni?
I-Fibromyalgia noGluten: Ukudla okuqukethe i-Gluten-Kunganikeza Ukulimazeka Okuningi Emzimbeni?
18 / 02 / 2020 /Amazwana we-0/i fibromyalgia/av olimalayo
Abantu abaningi abane-fibromyalgia baqaphela ukuthi basabela ku-gluten. Phakathi kokunye, abaningi banomuzwa wokuthi i-gluten ibangela ukwanda kwezimpawu nobuhlungu. Lapha sibheka ukuthi kungani.
Ngabe usabele ukuzizwa ungcono uma uthola isinkwa esiningi sama-gluten nesinkwa esiningi? Lapho-ke awuwedwa!
Eqinisweni, izifundo eziningana zokucwaninga (1) kuze kube kufinyelela esiphethweni sokuthi ukuzwela kwe-gluten kuyisici esinegalelo ku-fibromyalgia. Ngokuya ngocwaningo olunjalo, kukhona nabaningi abancoma ukuthi uzame ukusika i-gluten uma une-fibromyalgia. Kulesi sihloko uzofunda kabanzi mayelana nokuthi labo abane-fibromyalgia bangathinteka kanjani yi-gluten - futhi kungenzeka ukuthi kunjalo Imininingwane eminingi izokumangaza.
Ngabe uGluten uyithinta kanjani iFibromyalgia?
UGluten uyiprotheni esiyithola ikakhulu kukolweni, ibhali kanye ne-rye. I-Gluten inezici ezenza ama-hormone axhumane nokuzizwa ulambile, okusho ukuthi udla kakhulu futhi uba "nokulangazelela okumnandi" ngaphezu kwemithombo yamandla asheshayo (imikhiqizo enoshukela omningi namafutha).
Lapho i-gluten idliwa ngumuntu ozwela i-gluten, lokhu kubangela ukusabela ngokweqile kwabo, okungabangela ukusabela kokuvuvukala emathunjini amancane. Le yindawo lapho izakhamzimba zidonswa emzimbeni, ukuze le ndawo ivezwe iholele ekucasukeni nasekuthatheni izakhi zomzimba omncane. Yikuphi okuholela emandleni amancane, umuzwa wokuthi isisu sivuvukile, kanye namathumbu angacasulwanga.
Izeluleko Zokhonkolo Zempilo Engcono yamathumbu:
Amalungu ethu amaningi angaphezu kwe-29500 eqenjini elithi "Rheumatism and Chronic Pain" abika umphumela wezithako ezithile zemvelo. Zama isibonelelo nge probiotics (ama-gut bacteria amahle) noma Isisu Sesisu. Kwabaningi, kungaba nomphumela omuhle, futhi siyazi nokuthi impilo yamathumbu ibaluleke kakhulu ekutheni uzizwa kanjani ngenye indlela - zombili ngamandla, kepha futhi nomoya.
Leak odongeni oluncane lwamathumbu
Abacwaningi abaningana baphinde babhekisele "ekuvuzeni emathunjini" (2), lapho bechaza ukuthi ukusabela kokuvuvukala emathunjini amancane kungaholela ekulimazeni odongeni lwangaphakathi. Bakholelwa futhi ukuthi lokhu kungadala izinhlayiya ezithile zokudla zingene ezindongeni ezilimele, ngaleyo ndlela kubangele izimpendulo ezinkulu zomzimba. Ukuphendula okuzenzakalelayo kusho ukuthi amasosha omzimba uqobo ahlasela izingxenye zamangqamuzana omzimba wakhe. Okuthi, ngokwemvelo, ayinayo inhlanhla ikakhulukazi. Lokhu kungaholela ekuphenduleni kokuvuvukala emzimbeni - futhi ngaleyo ndlela kukhulise ubuhlungu nezimpawu ze-fibromyalgia.
Izimpawu Zokuvuvukala Uhlelo lwe-Intestinal System
Nazi ezinye izimpawu ezivame ukutholakala ngokuvuvukala komzimba:
Ukukhathazeka nezinkinga zokulala
Ukugaya (kufaka phakathi i-acid reflux, ukuqunjelwa kanye / noma uhudo)
Ukuphazamiseka kwengqondo (kufakiwe) inkungu yefibrous)
Ubuhlungu emzimbeni wonke
Ubunzima Ngokugcina Isisindo Esihle
Ukwanda kwezifo zeCandida neFungal izifo
Uyayibona intambo ebomvu ehambisana nalokhu? Umzimba usebenzisa inani elikhulu lamandla ukunciphisa ukuvuvukala emzimbeni - futhi i-gluten isiza ukugcina izimpendulo zokuvuvukala (kulabo abanokuzwela kwe-gluten nesifo se-celiac). Ngokunciphisa ukuvuvukala emzimbeni, umuntu, kubantu abaningi, angasiza ekwehliseni izimpawu nobuhlungu.
Izinyathelo Zokulwa nokuvuvukala
Ngokwemvelo, indlela yokuhamba kancane ibalulekile lapho uguqula indlela odla ngayo. Akekho umuntu olindele ukuthi usike lonke i-gluten noshukela phakathi nosuku, kodwa kunalokho ukuthi uzama ukwehla kancane kancane. Futhi zama ukusebenzisa probiotics (ama-gut bacteria amahle) ekudleni kwakho kwansuku zonke.
Uzothola umvuzo ngesimo sokungahambi kahle kokuvuvukala nezimpawu ezincishisiwe. Kepha kuzothatha isikhathi - ngeshwa akukho kungabaza ngalokho. Ngakho-ke lapha kufanele uzinikele ekushintsheni, futhi lokho kungaba nzima kakhulu lapho umzimba wonke uqaqamba ngenxa ye-fibromyalgia. Abantu abaningi bamane banomuzwa wokuthi abanayo imali yokwenza lokho.
Kungakho ngikucela ukuthi uthathe isinyathelo ngesinyathelo. Isib. Uma udla ikhekhe noma uswidi kaningi ngesonto, zama ukunciphisa kube ngezimpelasonto okokuqala nje. Zibekele imigomo futhi uyithathe, ngokweqiniso, kancane kancane. Kungani ungaqali ngokungena fibromyalgia ukudla?
Ubuwazi ukuthi ukuvivinya umzimba ngokwezifiso kungukulwa nokuvuvukala? Kungakho sithuthukise zombili izinhlelo zokuhamba nokuqina isiteshi sethu se-YouTube kulabo abane-fibromyalgia ne-rheumatism. Sibeka INANI ELIKHULU lokuthi ubhalise (mahhala) - futhi sikukhumbuze ukuthi kuzoba nezinhlelo eziningi ezinhle lapho ngokuzayo.
Ukuzivocavoca komzimba okufana nokuvuvukala
Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi ukuvivinya umzimba nokuzivocavoca kunemiphumela yokulwa nokuvuvukala ngokumelene nokuvuvukala okungapheli (3). Siyazi nokuthi kunzima kanjani ukuthola ama-system ejwayelekile okuzivocavoca uma une-fibromyalgia ngenxa ukuvuleka-ups nezinsuku ezimbi.
Ngakho-ke sinakho, ngokwethu chiropractor Alexander Andorff, udale uhlelo olunobumnene futhi olwenziwe ngezifiso ngaphezulu kwama-rheumatics. Lapha ubona izivivinyo ezinhlanu ezingenziwa nsuku zonke nokuthi abantu abaningi bazizwa benikeza ukukhululeka ekuhlanganeni okuqinile nemisipha ebuhlungu.
Zizwe ukhululekile ukubhalisela isiteshi sethu se-YouTube mahhala (chofoza lapha) ukuthola izeluleko zokuzivocavoca mahhala, izinhlelo zokuzivocavoca nolwazi lwempilo. Uyemukelwa emndenini okufanele ngabe uyiwona!
I-Fibromyalgia ne-Ukudla Ukudla
Sike sasho ngaphambili ukuthi ukuvuvukala kuthinta kanjani futhi kudlala indima ebalulekile ku-fibromyalgia, kanye nezinye i-rheumatism. Ukwazi okuthe xaxa mayelana nokuthi yini okufanele ungadli ngakho-ke kubalulekile kakhulu. Sincoma ukuthi ufunde futhi ufunde kabanzi mayelana nokudla kwe-fibromyalgia esihlokweni esixhumene nakho ngezansi.
Funda futhi: Konke okudingeka Ukwazi Nge-Fibromyalgia Diet [Umhlahlandlela Wokudla Okukhulu]
Ukwelashwa Okugcwele kwe-Fibromyalgia
I-Fibromyalgia ibangela ukuqhuma okuphelele kwezimpawu nobuhlungu obuhlukile - ngakho-ke kuzodinga ukwelashwa okuphelele. Akumangazi-ke ukuthi labo abane-fibro basebenzisa kakhulu amaphilisi ezinhlungu - nokuthi badinga ukulandelelwa okwengeziwe nge-physiotherapist noma i-chiropractor kunalabo abangathintekile.
Iziguli eziningi zisebenzisa nokuzithiba nokuzithiba ezicabanga ukuthi zizisebenzela ngokwazo. Isibonelo, izisekelo zokucindezelwa kanye inhlamvu iphuzu amabhola, kodwa kukhona nezinye izinketho eziningi kanye nezintandokazi. Futhi sincoma ukuthi ujoyine iqembu lakho lasendaweni lokusekela - ngokunokwenzeka ujoyine iqembu ledijithali elifana naleli eliboniswe ngezansi.
AUkuzisiza okunconyiwe kwe-fibromyalgia
Iziguli zethu eziningi zisibuza imibuzo mayelana nokuthi zona ngokwazo zingaba negalelo kanjani ekunciphiseni ubuhlungu emisipha nasemalungeni. Ku-fibromyalgia kanye ne-syndromes yobuhlungu obungapheli, sinesithakazelo ikakhulukazi ezinyathelweni ezihlinzeka ngokuphumula. Ngakho-ke sincoma ngokuthokoza ukuqeqeshwa echibini lamanzi ashisayo, yoga nokuzindla, kanye nokusetshenziswa kwansuku zonke kwe i-acupressure mat ( vula iphoyinti le-mat)
Amacebiso: acupressure uhlaka (Isixhumanisi sivuleka efasiteleni elisha)
Lokhu kungaba yindlela yokuzilinganisa enhle kakhulu kuwe ohlushwa ukuqina kwemisipha okungapheli. Le mat ye-acupressure esiyixhumanisa lapha nayo iza ne-headrest ehlukile eyenza kube lula ukufika emisipha yentamo eqinile. Chofoza isithombe noma isixhumanisi wakhe ukufunda kabanzi ngayo, kanye nokubona amathuba okuthenga. Sincoma iseshini yansuku zonke ephakathi kwemizuzu engama-20 nengama-40.
Ezinye Izinyathelo Zokuzenza Ngobuhlungu BeRheumatic kanye Nobuhlungu Obungamahlalakhona
Ukhilimu we-Arnica noma isixhobo sokushisa (kungasiza ukukhulula ubuhlungu)
Joyina iqembu le-Facebook «I-Rheumatism ne-Chronic Pain - INorway: Ucwaningo nezindaba» (chofoza lapha) ngezivuseleli zakamuva ocwaningweni nasekubhaleni abezindaba mayelana nokuphazamiseka kwezifo ezithile futhi ezingelapheki. Lapha, amalungu angathola usizo nokusekelwa - ngazo zonke izikhathi zosuku - ngokushintshana nakho kwabo siqu nezeluleko.
Yabelana Zizwe ukhululekile ukusekela labo abane-Rheumatism
Sikucela ngomusa ukuthi wabelane ngale ndatshana kwezokuxhumana noma ngebhulogi lakho(Zizwe ukhululekile ukuxhumanisa ngqo ne-athikili yethu noma iwebhusayithi vondt.net). Siphinde sishintshanise izixhumanisi namawebhusayithi afanele (xhumana nathi ngomyalezo nge-Facebook uma ufuna ukushintshanisa ngesixhumanisi ngewebhusayithi yakho noma ibhulogi). Ukuqonda, ulwazi olujwayelekile kanye nokugxila okwandisiwe yizinyathelo zokuqala ezibheke empilweni engcono yansuku zonke kulabo abanezifo ezingapheli zokuxilongwa.
Umthombo: Ishicilelwe (Bona imithombo yakho embhalweni)
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/fibromyalgi-og-gluten.jpg?media=1648573622 368 700 olimalayo https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 olimalayo2020-02-18 17:36:512022-03-22 15:12:20I-Fibromyalgia noGluten: Ukudla okuqukethe i-Gluten-Kunganikeza Ukulimazeka Okuningi Emzimbeni?
- Ukuphila ne-Ankylosing Spondylitis Amathiphu angu-9 wokulala kangcono ngeFibromyalgia